नियम विपरित काम गरेपछि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससहित २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा, अन्य कुन कुन? - Bizness News
नियम विपरित काम गरेपछि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससहित २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा, अन्य कुन कुन?
काठमाडौं- समयमा लेखापरिक्षण नगर्ने २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। बीमा समितिले एकैपटक २२ वटा बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो। समितिले समयमा लेखापरिक्षण नगर्ने/नबुझाउने जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीगरी २२ कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो।
समितिले बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसीमाभित्र बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई दश हजार रुपैयाँका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
प्रकाशित : बिहीबार , असार ९ २०७९०२:००